कसरी आफ्नो जीवन समयमा एउटा दूत बन्न: व्यावहारिक सुझावहरू
किन उनि विशेष बन्न चाहिन्छ - प्रश्न त्यहाँ अर्को प्रश्न छ रूपमा, केहि गलत "एउटा दूत कसरी बन्न" सहमत। स्वर्गदूतले - राम्रो हृदयले एक मानिस, कुनै एक कहिल्यै सधैं सबैलाई मद्दत गर्छ, तर कारण केही कारण वा अन्य संसारको आफ्नै छैन प्रारम्भिक बाँकी थियो हानि छ। अब, तर, यो दूतलाई जीवनमा बन्न सक्छ भन्ने स्वीकार गरे। का कसरी पत्ता गरौं!
आफ्नो जीवनकालमा एउटा दूत कसरी बन्न?
जीवित व्यक्तिको रूपमा, एउटा दूत आफूलाई बन्न - म सकेसम्म धेरै थाहा छैन। आफ्नो जीवन समयमा येशू ख्रीष्टको रूपमा पनि त निष्कपट र दयालु व्यक्ति हामी आधुनिक मान्छे के भन्न सक्छौं परमेश्वर, हुन सक्दैन। तर, बस भन्न छैन, र तपाईंले गम्भीर प्रकाश, स्नेह र राम्रो मान्छे ल्याउन यो पापी पृथ्वीमा आफ्नो मिशन बारेमा सोच छ भने, म तपाईं कसरी आफ्नो जीवित शरीर संग एउटा दूत बन्न, केही postulates सुझाव।
कहिल्यै, तिनीहरूलाई हाँस्न छैन तिनीहरूले तपाईंलाई मा हाँस्न पनि भने, निरन्तर राम्रो लागि तिनीहरूलाई प्रतीक्षा, अरूको नराम्ररी लाग्छ।
सधैं सबै मानिसहरूलाई मदत (तिनीहरूले योग्य छैन पनि भने)। को अपराधीहरूमाथि र एउटै "सिक्का" को कायर मानिसहरू प्रतिक्रिया छैन, र तिनीहरूलाई मदत र अचानक तिनीहरूले kinder हुनेछ।
पवित्र मानिसको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति - क्षमा सिक्न। केहि र बिल्कुल जो कोहीले क्षमा गर्न सक्षम हुन धेरै महत्वपूर्ण छ! सम्झना, यो धेरै गाह्रो, तर धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
हल्ला बिना नम्र र शान्त हुन, सही व्यवहार। विशेष गरी हतारमा कतै, किनभने शवर मा दूत कहिल्यै हतारमा उहाँले सधैं शान्त छ। मुस्कान। धेरै अवस्थामा चमत्कारी मुस्कान। यो जीवनको अप्रिय पक्षहरू सच्याउन मद्दत गर्छ।
तपाईं त्यसो गर्न सक्षम छन् रूपमा धेरै कुनै पनि दान घटनाहरू राख्नुहोस्। आखिर तपाईं यो अत्यावश्यक छ, जसको लागि ती मानिसहरूको सानो रकम दिन सक्छ, किन चुरोट वा मिठाई किन्न।
अब तपाईं बिरामी वा असहज भएकाहरूलाई रूपमा साथै, स्वर्गदूतहरूको मूर्तिहरु खरिद र समर्थन को आवश्यकता मा ती तिनीहरूलाई दिन सक्छ ... यी "स्वर्गदूतहरू" तिनीहरूले यो जीवन एक्लै छैनन् भनेर मान्छे सम्झाउने, तिनीहरूले गरौं कहिल्यै गर्ने संरक्षकको दूत छ उहाँले छोड्न छैन।
हाम्रो डिजिटल युगमा, तपाईं कृतज्ञ प्रतिक्रियाहरू जसले तपाईंलाई प्रेरित ती विद्युतीय र साधारण मेल को रूप मा, सकारात्मक प्रभाव प्रदान लेख्न सक्छ ...
एक पटक यी वस्तुहरू सबै तपाईं "पनि कठिन" हुन, अब तपाईं थाह एउटा दूत कसरी बन्न छलफल गर्नेछौं! तपाईं चयन - तर जसको लागि यो तपाईं भए छ। यो हाम्रो पत्नी, पति, आमा, बाबु, हजुरबा हजुरआमाले हुन सक्छ, तर सबै भन्दा - हाम्रो छोराछोरी छन्। तपाईं अभिभावक स्वर्गदूत चाहनुहुन्छ चयन व्यक्ति र समर्थन सबै मा रक्षा गर्न, सही उत्तर उत्साह, प्रदान गर्नेछ सही बाटो मा मार्गदर्शन र यति मा ...
एक अभिभावक स्वर्गदूत कसरी बन्न?
दुर्भाग्यवश, वर्तमान अभिभावक स्वर्गदूत जीवनकालमा कुनै एक कहिल्यै भएको छ! किनभने सामान्यतया तिनीहरूले हाम्रो मृत आमाबाबु, प्रियजनलाई र आफ्नो जीवनकालमा हामीलाई प्रेम गर्ने साथीहरू छन् ...
तिनीहरूले हामीलाई रक्षा गर्न लिएको छ भने, त्यसपछि हाम्रो जीवन को अन्त गर्न यो बोक्न। तर उहाँले यो गर्न छैन! तर, हामी पापको धेरै छ भने, हामी dissolute जीवन सञ्चालन, हाम्रो संरक्षकको दूत अस्थायी रूपमा हामीलाई सात वर्ष को लागि छोड्ने गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झना, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ र मदत गर्न चाहनुहुन्छ मात्र किनभने अभिभावक स्वर्गदूत हामीलाई सुरक्षा! तसर्थ, प्राय प्रार्थना र सहायता र निर्देशन लागि आफ्नो संरक्षक र सम्पर्क गर्न!
Iegudiile प्रधान दूत - परमेश्वरको सेवकहरूको संरक्षक
जापान धर्म - गुटहरू र शिक्षा को दुनिया को अनुरूप
व्याकुल एकल आशा चिह्न: यो के मद्दत गर्छ छ?
अगमवक्ता एलीशाले जीवन, प्रतिमा, akathist प्रार्थना
"सबै कसले दुख को आनन्द" - परमेश्वरको आमा को प्रतिमा। प्रतीक अर्थ
एक पासपोर्ट - यो छिटो र सजिलो छ
एक नमूना के हो? नमूना आवृत्ति
खाद्य पीवीसी फिलिम - फाइदाहरू
गर्न रूसी tyany वा जापानी हुन्
फिल्म "पिशाच Suck": अभिनेता र भूमिकाको
"Graco" Strollers। बच्चा गाडी
छाला मा राता? आज यो समस्या solvable छ।
सूप र के खाद्य पदार्थ हरेक महाराज को भान्सा मा उपस्थित हुनुपर्छ?
वजन कम गर्न स्वस्थ Qigong प्रणाली